जब वडा अध्यक्ष नै मध्यरातमा महिलासँग आपत्तिजनक अवस्थामा समातिए … – ramechhapkhabar.com
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष भरत महरा स्थानीय एक महिलासंग शंकास्पद रुपमा भेट्टिएका छन् । शंकास्पद रुपमा भेट्टिएका महरा र ती महिलालाई नियन्त्रणमा लिइएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रियंकाको खुलासा – ४० पटक गर्दा पनि कोरियोग्राफरलाई सन्तुष्टि मिलेन !
बलिउडमा मात्रै नभएर प्रियंका चोपडा विश्वभर चर्चामा रहेकी छिन् । उनको एक पुरानो अन्तर्वार्ता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । अभिनेत्री चोपडाले आफ्नो करियरको शुरुका दिनहरूको बारेमा कुरा गरेकी छिन् ।
प्रियांकले सन् २००३ को ‘अन्दाज’ बाट मुख्य अभिनेत्रीको रूपमा बलिउडमा प्रवेश गरेकी थिइन् । त्यो फिल्मको गीतको शुटिङ्ग को क्रममा जब प्रियांकले ४० रिटेक पछि पनि उचित शट दिन सकिनन् तब कोरियोग्राफरले उनलाई हप्काएका थिए । कोरियोग्राफरबारे प्रियंकाले भनिन्, ‘त्यो मेरो पहिलो गीतहरू मध्ये एक थियो । त्यो समयमा मैले धेरै कुरा प्राप्त गर्न बाँकी थियो ।
मलाई याद छ कि जब शट ४० टेक पछि पनि बाहिर आउन सकेन, कोरियोग्राफर राजु खान (सरोज खानका छोरा) ले माईक फ्याँक्यो र भन्यो–तपाईं मिस वर्ल्ड हुनुहुन्छ, किनकी तपाईंलाई लाग्छ कि अभिनेत्री बन्न सक्नुहुन्छ ? जान्नुहोस् कसरी नाच्ने, सिक्नुहोस् ।